टरिगाउँमा इन्धन डिपो कहिले ? - Pradesh Today टरिगाउँमा इन्धन डिपो कहिले ? - Pradesh Today
टरिगाउँमा इन्धन डिपो कहिले ?
तुलसीपुर, २० साउन । दाङको टरिगाउँ एयरपोर्टमा इन्धन डिपो स्थापनाका लागि अन्तिम तयारी भएको र तत्कालको व्यवस्थापनको लागि ब्राउजर आउनै लागेको भन्ने दुईपटक हल्ला भयो ।
एक पटक त आज तुलसीपुरको लागि हवाई इन्धन ब्यवस्थापन गर्न ब्राउजर हिडिसक्यो नियो । ब्राउजर हिडेको दुई वर्ष भयो अहिलेसम्म एयरपोर्टमा आइपुगेको छैन ।
केही दिन पहिले टरिगाउँमा इन्धन डिपो स्थापनाका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा भई सम्झौतासमेत भएको हल्लाले केही दिन ततायो । यो विषय पनि हिडिसकेको ब्राउजरको कहानीजस्तै भयो । बाहिर जति हल्ला भए पनि यो विषयमा निगममा अहिलेसम्म न त ठेक्का प्रक्रियाको कुरा अघि बढेको छ न त एक रूपैयाँ बजेट नै छुट्याइएको छ ।
तर ‘अप्रिल फुल’ जस्तै गरेर इन्धन डिपोको विषयले पटक–पटक चर्चा मात्रै पाउँछ । बर्षाै हुँदा पनि हल्ला यथार्थमा परिणत भएको छैन । तुलसीपुरको टरिगाउँ एयरपोर्टमा हवाई इन्धनको व्यवस्थापनमा लागि सुरूदेखि प्रयासका हल्लाहरू भएपनि एयरपोर्ट स्थापना भएको ६६ वर्षसम्म पनि हल्लै–हल्लाकै रूपमा सीमित देखिएका छन् ।
‘अप्रिल फुल’ जस्तै गरेर इन्धन डिपोको विषयले पटक–पटक चर्चा मात्रै पाउँछ। बर्षाै हुँदा पनि हल्ला यथार्थमा परिणत भएको छैन ।
वडा अध्यक्षदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मले आश्वासन बाँड्ने थलोको रूपमा अहिले एयरपोर्टको इन्धन डिपो रहेको छ ।
इन्धनको अभावमा पूर्ण क्षमताका यात्रु बोक्न नसक्दा भाडा बढी लिनुपरेको नेपाल वायुसेवा निगमले बताएको छ ।
राप्तीको पुरानो एयरपोर्टमा अहिले नियमित रूपमा हवाईसेवा सञ्चालन भइरहेको छ । तर हवाई सेवालाई सहज बनाउने हवाई इन्धनको व्यवस्थापन नहँुदा दङ्गालीहरूले चर्काे हवाई भाडासमेत तिर्नुपरेको छ ।
अर्काेतिर राजनीतिक नेताहरूले आज आयो भोलि आयो भन्दै इन्धन डिपोको हल्ला भने गर्न छोडेका छैनन् । छिटो जस लिने नाममा गलत हल्ला पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
दाङको टरिगाउँमा रहेको पुरानो एयरपोर्टमा हवाई इन्धन सहज गराउने गरी विगतदेखि प्रयास भइरहेका भने छन् । तर निगमले त्यसलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
वडा अध्यक्षदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मले आश्वासन बाँड्ने थलोको रूपमा अहिले एयरपोर्टको इन्धन डिपो रहेको छ । एयरपोर्टको नियमित सञ्चालन भएसँगै इन्धन डिपोको आवश्यक अत्यधिक छ ।
नियमित हवाई सेवापछि नेपाल आयल निगमले तत्कालको अवस्थालाई मध्यजगर गर्दै ब्राउजरको व्यवस्था गर्न लागेको तर त्यसको आधिकारिक निर्णय र प्रक्रिया सुरू भने नभएको जनाएको ।
नेपाल आयल निगम दाङका प्रमुख सुजित पोख्रेलले आजका मितिसम्म इन्धन डिपो, ब्राउजर स्थापनालगायतका कुनै पनि निर्णय नभएको बताए । ‘योजना रहेको छ, तर त्यो योजना निर्णायार्थ प्रस्तुत भएको छैन’ उनले भने
‘अहिलेकै अवस्थामा इन्धन डिपोको नाममा आएका कुराहरू सबै गलत हल्ला हुन् । उनले भने ‘विभागमा यो विषयमा बहस चलेको छ, यो दसँैसम्ममा ब्राउजरसम्म भए पनि राख्ने कि भन्ने छ, तर टेण्डर नै भएको अवस्था भने हैन र छैन पनि ।’
नेपाल आयल निगम नेपालगञ्जका प्रमुख नवविनोद पोख्रेलले हवाई इन्धनको व्यवस्थापनमा लागि तुलसीपुरमा ब्राउजर राख्ने तयारी भएको बताए । उनले त्यसको पूर्वाधार निर्माणका लागि तयारीमा समेत जुटेका बताए ।
उनले यो योजना सफल भएमा एयरपोर्टमा इन्धन रिसिभरका लागि ११ हजारदेखि १६ हजारसम्मको एउटा रिसिभर र ३० हजार लिटर स्टोरेज गर्ने ब्राउजर रहने छ । स्टोरेज भएमा इन्धनको समस्या हुँदैन । केही दिनसम्म स्टोरेजले नै इन्धनको आपूर्ति गर्नेछ । अहिले एयरपोर्टको लागि मात्रै गरियो भनेपछि फ्लाइट अनुसार क्षमता र पूर्वाधार बढ्छ, पोख्रेलले भने ।
तुलसीपुरमा उपमहानगर–पालिका वडा नम्वर १२ मा रहेको टरिगाउँ विमानस्थलमा स्थापना भएको ६६ वर्ष भएको छ । तुलसीपुर विमानस्थलमा दैनिक दुईवटा उडान सेवा सञ्चालनमा आएको भएपनि इन्धन डिपो नहुँदा यहाँका यात्रुहरूले चर्को भाडा तिर्दै आएका थिए ।
इन्धनको अभावमा पूर्ण क्षमताका यात्रु बोक्न नसक्दा भाडा बढी लिनुपरेको नेपाल वायुसेवा निगमले बताएको छ । तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले इन्धन डिपो स्थापनाका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।
उनले निगमले आउँदो दसैँसम्ममा तुलसीपुरमा हवाई इन्धनको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । ‘उहाँहरू दाङमै पनि आएर बोल्नुभएको छ, पटक–पटकको भेटमा पनि यो कुरा भएको छ’ प्रमुख पाण्डेले भने, ‘अहिलेको प्रतिवद्धता अनुसार हामीले दसैँसम्ममा ब्राउजर आउने विश्वास गर्ने आधारहरू केही रहेका छन्
। ‘दसैँसम्ममा ब्राउजर स्थापना हुने विश्वास रहेको छ’ उनले भने ‘अहिले ब्राउजरको व्यवस्थापन गरेर इन्धनको व्यवस्थापन गर्ने र आयल निगमको जग्गा व्यवस्थापन भएमा इन्धन डिपोको नै स्थापना गराउने प्रयास भएको बताए ।
ब्याजमा दश प्रतिशत छुट
१७ हातभन्दा कम चौडाइका घर बनाउन प्रतिबन्ध